I-Trendy SEO Trends Ngo-2017: Insight From Semalt
Ngo-2017, izintandokazi ezintsha zokusesha injini ziye zavela. Lokhu kulandela kulandelaisimemezelo sezinhlelo ezintsha ze-algorithm ezakhiwe yi-Google. Isimiso sinikeza isisindo esingaphezulu kuzici ze-SEO ezifana nezinga lokuqukethwe kanyeukubaluleka kanye nezinhlelo ezingokoqobo zomakhalekhukhwini. Ngesikhathi esifanayo, amaqhinga amadala afana nokugxilongwa kwegama elingukhiye abhekwa njengethimba elimnyamaamathuluzi, okubangela izijeziso.
uNik Chaykovskiy, uchwepheshe we i-Semalt Amasevisi weDivaysi anikeze imibono ye-SEO, engenza isikhundla sakho sewebhu masinyane kulo nyaka.
1 - hublot big bang man united. Lindela ukugxila okuqhubekayo ku-Mobile
I-Google iqukethe amasayithi omakhalekhukhwini. Emashumini amabili edlule,amaselula asethele kancane kancane ama-desktops ekuphequleni i-intanethi. Kusukela ngo-2015, i-Google yamemezela ukuthi amawebusayithi ayenobunganekungaba yizinqubo zeGoogle zokubeka amawebhusayithi. Ngaphezu kwalokho, amawebhsayithi angenayo ubuhlobo obuphathekayo besikhombimsebenzisi athola aisijeziso sokuthola amazinga aphansi. I-Google nayo yakwenza kucacile ukuthi maduzane uzohlukanisa ukufakwa ohlwini kwamawebhusayithi weselula nedeskithophu. NgokubaLesi sizathu, amawebhusayithi wokwakha amawebhusayithi kufanele abenze abe nomakhalekhukhwini, alungise ukusesha kweselula futhi akhulise ukuphendulaisayithi. Inkomba yeselula izokwenza amawebhusayithi anjalo afinyelele phezulu.
2. Lindela amanye amasayithi ukuthi athathe ama-Mobile aphuthumayo Amakhasi (AMPs)
Kusukela ngo-2015, i-AMP iye yaba yisimo uma kuziwa ekuthuthukiseni amakhasi ewebhufor iziphequluli mobile. Kusukela ekusetshenzisweni kweselula, AMP ingenye yezindlela zokuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi ine-UEO..I-AMP ilayisha izikhathi ezingaba ngu-5 ngokushesha futhi ngesikhathi esifanayo, igcina ukusetshenziswa kwedatha kuze kube izikhathi ezingu-8 ngendlela evamile yokusebenzisa amawebhusayithi.
3. Ukubaluleka kohlelo lokusebenza komsebenzisi (UEO) Uzokhula
I-Google icebisa abathengisi be-intanethi nabakhi bewebhusayithi ukuthi bagcizelele kakhuluekwakheni amawebhusayithi wekhwalithi. I-Google incike ezintweni ezifana nokulula, kalula ukusetshenziswa, ukuhamba nokufinyeleleka. Isayithi kufanele linikezeumsebenzisi isipiliyoni esihle sokuphequlula kuso ukuze uqale kuqala ezinjini zokusesha.
4. Ukusesha ngezwi kuvukile
Ukusesha ngezwi kuthatha njengezinye zezindlela zokwenza usesho.Isofthiwe efana ne-Siri, Cortana ne-Google Now isebenzisa imiyalo yezwi ukubeka imibuzo yokusesha kwinjini yokusesha. Abathuthukisi bewebhu kumele baqalesingena kule nsimu entsha ikakhulukazi ngokuphakama kwamadivayisi asebenzisa i-intanethi njenge-smart TV's.
5. Okuqukethwe Kukhona Manje Isisusa-Ukugxila
I-SEO ihlose ukucwaninga amagama angukhiye. Noma kunjalo, i-Google manje isekelwe usesho.I-Google izobeka okuqukethwe okuhambisana nesithakazelo esikhulu phakathi kwezilaleli. Amapharamitha afana nesilinganiso sokunciphisa, isikhathi sokubandakanya namakhasi avakashelwekuzoba ezinye zezici ekusezingeni eliphezulu kuma amakhasi we-Google search results (SERPs).
Njengomthengisi wedijithali, umuntu kufanele ahlale eqaphile futhi alungele ukuhambisana neizinguquko. Kulo nyaka, izichibiyelo eziningana zenziwe yizinjini eziningi zokusesha. Kusuka ku-AMP ishintshela ku-SEO yeselula. Lezi zinguqukosenze amathrendi amaningana ukushintsha umkhuba wendabuko wenqubo yokucinga. Ukulandela amathiphu okukhulunywe ngenhla, omunye angakulungelaizinguquko eziba khona ekutholeni indawo enhle kuma-search.